Ummanni Sudaan mormii isaanii itti fufanii gaggeessaa jiru – Fana Broadcasting Corporate
Ummanni Sudaan mormii isaanii itti fufanii gaggeessaa jiru
Finfinnee, Eebila 4, 2011(FBC)-Kaleessa erga preezdaantiin Sudaan Oomar Hasan Albashir waggaa 30 booda humna waraanaa biyyattiitiin aangoorraa kaafamanii to’annaa jala oolfamanii as ammas ummanni mormiif ba’e manatti hin galle.
Humni waraanaa Sudaan kaleessa erga preezdaant Oomar Hasan Albashir aangoorraa kaasee booda ummanni manatti deebi’anii akka galan karaa mana maree haaraa humna waraanaa biyyattiin hundeeffameen labsee ture.
Labsii kana boodas garuu lammiileen Sudaan kumaatamaan lakkaa’aman daandilee gurguddoo magaalaa Kaartuumitti ba’uun mormii isaanii itti fufaniituma jiru.
Preezdaant Oomar Hasan Albashir mormii ummataa ji’oota hedduu lakkoofsiseen aangoorraa kaafamanis ammas qaamni biyyattii bulchuuf qabate humna waraanaa mootummaa kanaa ture waan ta’eef jijjiiramni hin jiru jechuun mormii isaanii itti fufaniiru ummanni biyyattii.
Maanguddoon umurii waggaa 75 Preezdaant Oomar Hasan Albashir wayita aangoorraa kaafamee to’annoo jala ooluu dhaga’an lammiileen biyyattii miira gammachuu keessa seenan turtii yeroo muraasaa booda garuu miirri gammachuu kun badee iddoo duraatti deebi’aniirus jedhameera.
Kun osoo kanaan jiruu Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii fi Gamtaan Afriikaa biyyattiin akka tasgabbaa’uu qabduu fi ummanni Sudaanis nageenyaaf tumsuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru.
Muummeen ministiraa Maalii aangoo isaanii gadhiisaan
Preezdaantiin Peeruu duraanii of ajjeessan
Kooriyaan Kaabaa Maayiik Poompiyoon marii nuukleeraa irratti akka hin hirmaanne…
Iraan guyyaa raayyaa ittisaa biyyaalessaa kabajaa jirti